Spotify na-eme ka arụ ọrụ dịkwuo mma | TeraNews.net
Spotify software mma arụmọrụ
na-ede akwụkwọ Kravetz Pavel E bipụtara 07.12.2020
Nseta ihuenyo na-akpali mmasị nke ụdị Beta nke ngwa Spotify abanyela na Internetntanetị. Enwere ike ime na mmemme Spotify na-emeziwanye arụmọrụ. Ọrụ maka ịchọ egwu n'ọbá akwụkwọ nkeonwe ga-egosi na ntọala ma ọ bụrụ na enweghị njikọ na nchekwa data ngwa.
Gịnị bụ Spotify na Ihe Mere I Ji Chọọ Ya
Spotify bụ ọrụ na-enye gị ohere iwu na-ege ntị music online na .ntanetị. Akụkụ bụ isi nke usoro ihe omume ahụ bụ algorithms ọrụ ya. O zuru ezu ige egwu dị ole na ole maka ọrụ iji megharịa onwe ha na uto egwu egwu nke onye na-ege ntị. Ná ngwụsị nke playlist playback, usoro ihe omume onwe ya ga-ahụ ọhụrụ music na-enye na-ege ntị ya. Dabere na nyocha ndị ọrụ, 99% nke ngwa ahụ "na-eche" mmasị onye nwe ya.
I nwekwara ike ichefu banyere nbudata music collections si iyi ruo mgbe ebighị ebi. Ọrụ ahụ n'onwe ya na-achịkọta Ngwakọta nke egwu ndị ama ama kwa ụbọchị, izu, ọnwa, afọ. Nwere ike idozi egwu dịka ọkwa dị iche iche.
Ga-akwụ ụgwọ iji Spotify. Ma ọ bụ karịa, denye aha maka oge ụfọdụ nke iji. Ọnụahịa ọrụ ahụ dị iche maka mba ọ bụla. Onye na-ede ego ọnụahịa amaghị. N'ihi na ụfọdụ mba ndị bara ọgaranya ọnụahịa nke Spotify dị ọnụ ala. Na mba ndị dara ogbenye (n'otu dollar ahụ nhata) ị ga-akwụ ụgwọ 5-10 ugboro karịa.
N'ezie, ị gaghị akwụ ụgwọ ihe ọ bụla site na iji Spotify n'efu. Ma ị ga-anagide mgbasa ozi, mmachibido iwu na nbudata egwu na nchekwa nke gị. Ọzọkwa, nsogbu dị ole na ole gbasara ogo na ngbanwe egwu na-akparaghị ókè.
N'ezie, ndị mmemme kwesịrị iwebata arụmọrụ ka mma ogologo oge. E kwuwerị, a na-akwụ ụgwọ ihe omume ahụ ma ọrụ ahụ ga-abụrịrị ọkwa kwesịrị ekwesị. Betadị beta tinyere ikike ịge egwu na-adịghị n'ịntanetị. Maka nke a, nyocha ga-apụta na mmemme ahụ, nke ga-achọ egwu na nchekwa ekwentị na akwụkwọ ndekọ aha niile. Na mgbakwunye, ọrụ a yitere ọrụ Youtube "mix offline".
Ọ bụ ezie na ngwa ahụ na-arịọ maka ego, ọ na-eme ka ndụ ndị ọrụ dị mfe. Dị ka o kwesịrị ịdị, maka ndị na-ahọrọ ngwaahịa ọhụrụ, karịa "ịhịa aka" egwu ochie na oghere.
3 setị Blogger na 1 Ring Light: nyocha
Ozi mgbaàmà - gịnị ka ọ bụ, atụmatụ
Xiaomi Mi 11 Ultra - IP68 nchedo ibu
Newzọ ọhụrụ iji nweta ego na ikpe megide Apple
Honor Pad 7 bụ mbadamba nkume mbụ nke ika China
Xiaomi agbagola ebe 3 na ere nke smartphones
Hummer EV SUV - eletrik SUV kpughere
Huawei H6 WS8000 / 6 - ndị China weghaara nkwalite Mesh
Random ozi ọma
Akwụkwọ ndetu VAIO SX12 na-ekwu na ya na MacBook
Otu Netbook OneGx1 Pro - Laptọọpụ Egwuregwu Pocket
Xiaomi washer with draya
ATV: kedu ihe ọ bụ, nyocha, nke ka mma ịzụta
Otu esi agbanyụọ mgbasa ozi YouTube na TV
TV BOX VONTAR X3: onye ọrụ ego kachasị mma na 2020
MAMA INAN: Onye asusu di otutu
Ọhụrụ flagship Beelink GT-King (Amlogic S922X) Nyocha zuru ezu
Asus TUF Gaming VG27AQ Nyochaa - Nyochaa Ziri Ezi
Maka nkwado, biko kpọtụrụ: teranews.net@gmail.com
2021 - Teranews. Ikike Niile Echekwabara
Nhazi weebụ: Sitepro